Full-Time Sale & Marketing
– Marketing အတွေ့အကြုံ အနည်ဆုံး ၂ နှစ်ရှိရမည်။
– အကျင့် စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။
– ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
– Excel, Word, Email သုံးစွဲနိုင်ရမည်။
– Marketing ဖုန်း call များ ပြုလုပ်နိုင်ရမည်။
– စကားပြော ပြေပြစ်စွာ ပြောဆို ဆက်ဆံနိုင်ရမည်။
– Internet ကောင်းစွာ အသုံးပြုတက်ရမည်။
– Marketing ရှာဖွေပေးနိုင်ရမည်။
– ရုပ်ရည် သန့်ပြန့်ရမည်။
– လေ့လာသင်ယူနိုင်စွမ်း ရှိရမည်။
– လစာ ၂သိန်း မှ ၅ သိန်း (Commission ရှိသည်)
Job Categories: Marketing / Public Relations. Job Types: Full-Time. Job Tags: it, marketing, service, and web site. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 17 days.